I-Cannabidiol (CBD) Esezingeni eliphezulu Esebenzisa kahle kakhulu iCannabis - Hielscher Ultrasound Technology
I-hielscher ultrasonic extractors yiyona ndlela yokusebenza yobuciko uma kuziwa endaweni ethembekile futhi ephumelelayo yamafutha we-hemp ne-CBD. I-ultrasonication yaziwa kakhulu njengendlela yokukhishwa kakhulu enamandla yokukhipha izici eziwusizo kusuka ku-botanicals. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokufakelwa njenge-extraction CO2 extraction, inqubo ye-ultrasonic idlula ekusebenzeni kahle, ukusebenza okulula nokusetshenziswa okunemisebenzi eminingi.
Inzuzo enkulu ye-ultrasonication yi-range lokushisa, lapho isizinda singenziwa khona. Isizinda se-Ultrasonic singenziwa kusuka ku-ethanol eshisayo / efudumele kuze kufike ku-ethanol ye-cryogenic (-70 ° C). Lokhu kuvumela ukuhlukaniswa okuhlosiwe kwama-compounds oyifunayo. I-Sonication ekwenzeni i-ethanol e-cryogenic i-ethanol ikakhulukazi emathangeni angama-cannabinoids kanye ne-terpenes, ngenkathi isithwathwa eshisayo / eshisayo se-ethanol siphumela ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zama-phytochemical (eg aldehydes, esters, ethyls, ketones). Izitshalo ezigcwele izimboni ziqukethe ubuningi bezinhlanzi ezinamagciwane, amathepenethi namanye ama-phytochemicals. Ngokusho komthelela we-entourage, amakhemikhali amakhemikhali (isib. Ama-cannabinoids) anemiphumela emihle futhi asebenze kangcono kanye namanye amakhemikhali e-botanical. Lokhu kusho ukuthi amafutha e-CBD aqukethe i-CBD kanye namanye ama-cannabinoids, ama-terpenes nama-phytochemicals azoba nemthelela ephakeme kakhulu yokwelashwa kunamafutha e-CBD aqukethe i-CBD kuphela. Noma kunjalo, isikhumba se-chlorophyll sigwenywe ngoba sinikeza ukukhipha ukunambitheka okungathandeki.
Isizinda se-ultrasonic: Isizinda se-ultrasonic singenziwa kalula ku-batch noma i-flow-through mode eqhubekayo – kuye ngokuthi inqubo yakho ivolumu. Inqubo yokucubungula iyashesha kakhulu futhi iveza inani eliphakeme lamahlanganisi asebenzayo.
Ukuhlunga: Hlunga ingxube ye-plant-liquid ngokusebenzisa isihlungi sephepha noma isikhwama sokuhlunga ukususa izitshalo eziqinile ezitshalweni.
I-evaporation: Ukuze kuhlukaniswe amafutha e-CBD kusukela ku-solvent, ngokuvamile kusetshenziswa i-rotor-evaporator. I-solvent, isib. I-ethanol, ingabuyiselwa futhi iphinde isetshenziswe kabusha.
I-Nano-Emulsification: Nge-sonication, i-CBD ehlanzekile ingacubungulwa ibe yi-nanoemulsion ezinzile, ehlinzeka nge-bioavailability enhle kakhulu.
Landa imiyalelo yakho eningiliziwe ngesinyathelo-nese lapha!
Izidakamizwa ze-ultrasonic ze-Hielscher zingacutshungulwa ngokuqondile ezimweni ezifanele zokukhipha – ukukhipha inani eliphakeme kanye nekhwalithi evela kuzinto zakho eziluhlaza (amaqabunga e-cannabis, amaqabunga, iziqu njll). Ukuqina kwe-ultrasound kubalulekile uma kuziwa ekufakweni kwamakhemikhali e-botanical njengamafutha aphezulu e-CBD kusuka ku-cannabis. Ama-ultrasonicators ethu UP400St, UIP500hdT, I-UIP1000hdT futhi I-UIP2000hdT zihlonywe ngokulawula okucacile kwe-amplitude, inzwa yokushisa nokulawula isikhathi ukuvumela ukuthi usebenze ngaphansi kwezimo ezifanele. Isikrini sokuthinta imibala nesilawuli sesiphequluli senza umsebenzi nokuqapha okulula futhi okunokwethenjelwa.
I-120L Ultrasonic Batch CBD Isizinda seCannabis nge-UIP2000hdT ne-Agitator
UP400St ukukhishwa kwama-cannabinoid kusuka ku-cannabis
I-ethanol isetshenziselwa kabanzi njenge-solvent for the extraction of cannabinoids. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher avula ukukhethwa kwakho kwe-solvents kakhulu: ingxube yamanzi-i-ethanol, i-ethanol cryogenic, i-ethanol, i-over-proof alcohol, i-glycerin njll.
I-ethanol iyinhlanganisela ethandwa kakhulu kusukela i-ethanol ichitheka kokubili izinto ezinama-polar (hydrophilic) ne-nonpolar (hydrophobic / lipophilic). Izingxube ze-ethanol / amanzi ezilinganisweni ezingafani zingasetshenziselwa isizinda se-ultrasonic, futhi. Izinzuzo ze-ethanol / amanzi zifaka izindleko ezincishisiwe (ngenxa ye-ethanol encane) nokuphepha okuphakeme kusukela okungenakuvutha. Isizinda se-ultrasonic ne-ethanol cryogenic (cishe -70 ° C) sinikeza isivuno esikhulu kanye nekhwalithi.
Amadivaysi ethu e-ultrasonic aklanyelwe ukusebenzisana okuhle komsebenzisi, okusho ukuthi extractors zethu ze-ultrasonic zingaba lula futhi ziqhutshwa ngokuphepha. Siyajabula ukusiza amaklayenti ethu ngesikhathi sokusetha kwabo futhi sibanikeza izincomo mayelana nokuhlelwa kwe-ultrasonic nemingcele. Sikunikeza idivayisi efanelekayo – for processing kanye inline processing.
Izinzuzo ngaphezu kwe-CO2 Ukukhipha
I-CO eqoshiwe2 I-extractors iyabiza ukuthenga nokusebenza. Ukusebenza kwe-CO2 ukukhipha kuyinkimbinkimbi futhi kudinga ochwepheshe owaziyo ukuthi yiziphi izingcindezi namazinga okushisa afanelekile ukuthola ama-cannabinoids ayifunayo nama-terpenes. Izingcindezi eziphakeme kanye nokushisa okuphezulu kunomthelela omkhulu ekunyuseni kwezindleko uma kuqhathaniswa nesakhiwo esijwayelekile samanzi. Uma kuqhathaniswa, isizinda se-ultrasonic asithengi ukuthenga nokugijima, kuvumela ukukhishwa okuphezulu, okutholakala kungakapheli imizuzu embalwa. Njengoba i-sonication yenziwa ngokucindezela (noma ukuphakama kancane) nokushisa okuphansi, isizinda se-ultrasonic kulula futhi siphephile ukusebenza. Isizinda se-ultrasonic sika-Hielscher siyaqaphela futhi sithandwa ngesilinganiso sabo sezinga eliphezulu, ukusetshenziswa nge-solvents ehlukahlukene, ukusetshenziswa okulula nokusabalalisa okulinganayo.
Ukuze uthole ukutholakala okukhulu kwezinto eziphilayo kanye nemiphumela emihle ye-CBD, amaconsi amafutha e-CBD kufanele alawulwe ku-nanoform.
Ubuhle bamadivayisi ase-Hielscher ultrasonic busetshenziswa ekusetshenzisweni kwazo okuhlukahlukene: Izindlela zethu ze-ultrasonic zingasetshenziselwa ukukhishwa kwe-cannabis kanye nokukhiqizwa kwe-nanoemulsions. Kufanele uthenge idivaysi eyodwa kuphela ukukhipha i-CBD kusuka ku-cannabis nokucubungula amafutha e-CBD ngemuva kwalokho ibe ne-nanoemulsion enhle kakhulu.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-nanoemulsification ye-ultrasonic ye-CBD!
Hielscher Ultrasonics inikeza ultrasonic isizinda imishini for cannabis isizinda kanye emulsification of nano-formulations.
Ngaphandle kokulawulwa kwazo okuqondile nobungani bomsebenzisi, wonke amadivayisi wethu we-ultrasonic akhelwe ukusebenza kwe-24/7. Amasistimu ethu ayakwazi ukuletha kusuka kokuphansi kuya kokuphakeme kakhulu. Ngokukhishwa kwama-cannabinoids nama-terpenes, sinikela ngama-sonotrode akhethekile e-ultrasonic (awaziwa nangokuthi ama-ultrasonic probes noma izimpondo) enzelwe ukuhlukaniswa okubucayi kwezinto ezisezingeni eliphakeme ezisebenzayo. Zonke izinhlelo zethu zingasetshenziselwa ukukhipha kanye nokufakwa emulsification ngemuva kwalokho kwama-cannabinoids.
Xhumana nathi namuhla! Siyajabula ukutusa wena ukusetha okuhle kakhulu kwe-ultrasonic ngezidingo zakho zesitokisi!
I-Brenneisen R. (2007): I-Chemistry kanye nokuhlaziywa kwe-Phytocannabinoids nezinye izidakamizwa ze-Cannabis. Ku: i-ElSohly MA (eds) i-Marijuana kanye ne-Cannabinoids. I-Science and Forensic Science.
Izinzuzo ze-Ultrasound Extraction
Isizinda se-ultrasonic sisekelwe esimisweni se-acoustic cavitation. I-Cavitation yenzeka njengemiphumela yokusebenza okuphezulu kwe-ultrasound kuketshezi futhi ibonakaliswa yimiphumela yemishini enamandla, eyenzeka ezindaweni ezibizwa ngokuthi izindawo ezishisayo.
Lapho amandla amaza e-ultrasound eyimibhangqwana ibe uketshezi (isb. Ukumiswa okuqukethe izinto ze-botanical ku-solvent), amagagasi e-ultrasonic ahamba oketshezi abangela ukushintshana kwemijikelezo ephezulu yengcindezi / yengcindezi ephansi. Ngesikhathi semijikelezo enengcindezi ephansi, kudalwa amabhamuza we-vacuum (okuthiwa ama-bubble cavitation), akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi. Ngosayizi othile, lapho amagwebu engakwazi ukumunca amandla athe xaxa, agxumagxuma ngamandla ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okukhulu. I-bubble implosion ibonakala ngamandla amakhulu wokufaka amandla, kufaka phakathi ama-micro-turbulences nemifudlana engamanzi enama-velocities angafika ku-100m / s. Le miphumela ye-cavitational shear yaziwa nangokuthi imiphumela ye-sonomechanical. Isizinda se-Ultrasonic sama-molecule we-bioactive ikakhulu sibangelwa imiphumela ye-sonomechanical:
Izimo ezingavamile ze-ultrasonic cavitation perforate kanye / noma ukuphazamisa izindonga zezingqimba namagundane futhi unike amandla ukungena okukhulu kwe-solvent kwisampula. Isizinda se-ultrasonic sizuza ngaleyo ndlela ukuhlukaniswa okusheshayo kwamakhemikhali – kuphumelela izindlela ezivamile zokukhipha esikhathini senqubo emfushane, isivuno esiphezulu, nasemazingeni okushisa aphansi. Njengokwelashwa okuncane (sono-) ngomshini, ukukhishwa kwe-ultrasound kuvimbela ukonakala okushisayo kwamakhemikhali e-bioactive futhi kudlula amanye amasu afana nesizinda esijwayelekile se-solvent, i-hydrodistillation, noma i-Soxhlet extraction, eyaziwa ngokucekela phansi ama-molecule azwela ukushisa. Lezi zinzuzo zenza isizinda se-ultrasonic inqubo ekhethwayo yokukhishwa kwamakhemikhali asebenza ngokuzwela ukushisa kuma-botanicals.
Ngakho-ke isizinda se-ultrasonic kuyindlela ekhethwayo yokukhipha ama-molecule we-bioactive afana ne-polyphenols, terpenes, amafutha abalulekile nama-cannabinoids ezintweni zezitshalo.
Izimo ezingavamile ze-ultrasonic cavitation perforate kanye / noma ukuphazamisa izindonga zezingqimba namagundane futhi unike amandla ukungena okukhulu kwe-solvent kwisampula. Isizinda se-ultrasonic sizuza ngaleyo ndlela ukuhlukaniswa okusheshayo kwamakhemikhali – ukuphazamisa izindlela ezijwayelekile zokukhipha ngesikhathi sokucubungula okufutshane, isivuno esiphezulu, nasezingeni eliphansi lokushisa. Njengendlela yokwelashwa okunomsoco, i-ultrasound extraction ivimbela ukuchithwa okushisayo kwama-bioactive compounds futhi ngaphandle kwezinye izindlela ezifana ne-conventional solvent extraction, i-hydrodistillation, noma isizinda so-Soxhlet, esaziwa ukubhubhisa ama-molecule azwela ukushisa. Lezi zinzuzo zenza isizinda se-ultrasonic inqubo ethandwayo yokukhululwa kwamakhemikhali asebenzayo okushisa aphezulu avela ku-botanicals.
Ama-cannabinoids ayizinhlanganisela ezenzeka ngokwemvelo ezitholakala esitshalweni se-Cannabis sativa. Kunezinhlanganisela ezingaphezu kuka-480 ezahlukahlukene ezikhona kulesi sitshalo se-cannabis. Insangu (ebizwa nangokuthi insangu) umuthi onamandla owedlula wonke wokulapha. Ezinhlobonhlobo zamakhemikhali asebenzayo ngokwelashwa, ama-phytochemicals angama-85 abizwa ngama-cannabinoids (nokuningi kungatholakala). I-CBD ne-THC (i-tetrahydrocannabinol / Δ9-THC) yi-cannabinoids evelele kakhulu. Isici esibaluleke kunazo zonke esihlukanisayo ukuthi i-CBD ayiyona i-psychotropic, ngenkathi i-THC ikhombisa imiphumela yengqondo.
Ama-cannabinoid asetshenziselwa izizathu zokuzilibazisa nezizokwelapha.
Idatha ye-Pharmacokinetic ye-CBD:
ukutholakala kwemvelo – I-Oral: 13-19%, ifakiwe: 11-45% (kusho 31%)
ukuqeda isigamu-ukuphila: amahora angu-9
EU.SA, imikhiqizo ye-CBD equkethe ngaphansi kuka -03% i-THC, ekhishwe imbewu noma izitshalo ze-hemp zezimboni, ilawulwa ngokwezomthetho futhi ingathengwa ngokomthetho kuzo zonke izifundazwe, kungakhathaliseki ukuthi imayini yayo.
Idatha ye-Pharmacokinetic ye-THC:
ukutholakala kwemvelo – I-Oral: 6-20%, inhale: 10-35%
ukuqeda isigamu-ukuphila: amahora angu-1.6-59, amahora angu-25-36 (i-dronabinol esebenzisa ngomlomo)
Ama-nano-cannabinoids ama-cannabis amafutha asungulwe emulsion yamafutha-emanzini, ahlinzekela ukukhuphuka okuphezulu (ukutholakala okusheshayo nokunyuka kwempilo) futhi ngaleyo ndlela kungenziwa ngaphansi kwesilinganiso esincane. Ngaphezu kwalokho, i-nanoemulsions ye-cannabis ingahlanganiswa kalula kwimikhiqizo yezokwelapha, iziphuzo, ama-edibles, kanye nemikhiqizo yezimonyo (isib. Ama-creams, lotions). Njengoba i-nano-emulsions ivame ukushintsha, ingahle ibekwe eminye imikhiqizo ngaphandle kokuthinta ukubonakala.
Ukuze uthole i-nano-emulsion ephezulu, usayizi we-droplet, ne-polydispersity index (PDI), izici ezibalulekile ezithinta ukuzinza kwe-nanoemulsion kakhulu. Inkomba ephezulu ye-polydispersity ibonisa ukuthi kukhona khona amaconsi amakhulu, okuyinto ehlukumeza i-emulsion nge-coalescence nokuvuthwa kwe-Ostwald. Ngakho-ke ukusatshalaliswa kokusatshalaliswa okwesibalo esincane nesincane kunomthelela obalulekile wokuzinza nokuphila okwesikhashana emulsion (nano- / micro-).
I-Cannabis-Nanoemulsions: Amafutha we-hemp noma ama-nanoemulsions e-CBD, i-hemp / CBD amafutha ahlanganiswe namafutha ezingeni eliphezulu. Amafutha okutshala okuvamile amafutha e-MCT, amafutha kakhukhunathi, i-avocado amafutha, amafutha omnqumo, amafutha ashukela, amafutha omnandi ama-almond kanye namafutha ase-walnut. Njengoba i-emulsifier (i-agent efakiwe, i-agent agent, i-stabilizer) ine-polysorbate engu-80, i-lecithin, i-quillaja saponins, i-lecithin ye-soy, nesigqabhe esasetshenziswa ngokuphumelelayo. I-Xanthan gum, i-pectin, noma i-whey amaprotheni inganezelwa ngaphezu kokuthuthukisa i-rheology ne-stability emulsion.
I-CO2 isizinda singenziwa ngezindlela ezimbili: isizinda esiphezulu nesicacile. Uma i-CO2 lisetshenziselwa i-solvent, inezici ezihlukahlukene ezixhomeke esimweni sayo sogesi. I-CO engabhalisiwe2 ichaza i-CO2 kuhulumeni phakathi kuka-5-10 ° C (278.15-283.15K, 41-50 ° F) nokucindezela phakathi kuka-800-1500psi (54.43-102.06m, 5.51-10.24MPa). Kulo lokushisa nokucindezelwa, CO2 ziziphatha njengoketshezi obukhulu. Lapho isimo sezinga lokushisa nokucindezela landa futhi lidlula izinga lokushisa elibucayi (304.25 K, 31.10 ° C, 87.98 ° F) nokucindezeleka okukhulu (72.9mitha, 7.39MPa, 1,071psi), i-CO2 iyanda emgodini njengegesi kodwa ubukhulu obunjengokwesiketshezi. Lokhu kwaziwa ngokuthi i-carbon dioxide engaphezulu (sCO2 noma i-SC-CO2)).
I-CO engabhalisiwe2 Isizinda sisebenzisa ukushisa okuphansi nokucindezela okuphansi futhi ngaleyo ndlela kuthatha isikhathi esengeziwe. I-CO engabhalisiwe2 isizinda sinikeza isivuno esincane futhi singakwazi ukugcina ezinye ze-terpenes namafutha. I-CO ephezulu2 isizinda, amazinga okushisa aphezulu kanye nokucindezelwa okuphakeme, okungawalimaza i-terpenes namanye ama-phytochemicals. I-CO ephezulu2 ukuchithwa, inqubo engezansi – eyaziwa ngokuthi i-winterization – kudingeka ukuba ususe ama-compounds angafuneki njenge-lipids ne-chlorophyll. Ngesikhathi isinyathelo sasebusika, ukukhishwa okuluhlaza kukhishwa ethanol ukuhlukanisa ama-cannabinoid ehlanzekile namathepenethi avela kwezinye izakhi ezihlanjululwe ngesikhathi sokukhipha.